Noterena hanova indray ny clip Eurovision i Makedonia Avaratra taorian’ny fahatezeran’ny nasionalista · Global Voices teny Malagasy
Nampiseho sangan'asa ahitana sainam-pirenena Boligara ilay horonantsary fohy tany am-boalohany
Voadika ny 12 Avrily 2021 4:30 GMT
Sary hajia Youtube ofisialin'ny Eurosong 2021 “Eto aho mijoro” avy amin'i Vasil Garvanliev nisolo tena an'i Makedonia Avaratra .Official Youtube thumbnail image of the Eurosong 2021 “Here I stand” by Vasil Garvanliev representing North Macedonia.
Meta.mk no namoaka voalohany ity tantara ity. Navoaka eto indray ny endrika nasiam-panovana teo ambanin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty misy eo amin'ny Global Voices sy Metamorphosis Foundation.
Noterena ny mpandefa fandaharan'ny MRTV ao Makedonia Avaratra mba hanova indray ny horonantsarin'ny mpifaninana ao amin'ny firenena tamin'ny fifaninanan-kira Eurovision tamin'ity taona ity taorian'ny sary roa mampiseho sainam-pirenen'i Bolgaria ka nahatezitra ny besinimaro.
Navoaka tamin'ny 11 marsa, nalaina ampahany tao amin'ny National Gallery Daut Pašin Amam ao Skopje ny horonantsarin-kira “Here I Stand”, avy amin'ilay mpihira Vasil Garvanliev, ary mampiseho zava-kanto maro avy amin'ireo mpanakanto Makedoniana. Nandritra ny fotoana fohy, nahitana ny lokon'ny sainam-pirenena Boligara telo ilay horonana.
Tsy dia nety loatra tamin'ny nasionalista Makedonia Avaratra izany, izay tao anatin'ny tapa-bolana lasa, nanao fanentanana manohitra an'i Garvanliev noho ny “fanapariahana propagandy Bolgara.” Nahangona sonia 20.000 ny fanangonan-tsoni iray tao amin'ny Change.org mitaky an'i Garvanliev hiala amin'ny fifaninanana.
Manampy trotraka ny resa-be ny fananan'ny Garvanliev zom-pirenena Makedoniana sy Bolgara, satria manana renibe teraka tao Bolgaria izy.
Araka ny voalazan'ny National Gallery, “Fanomezam-boninahitra ho an'i Andrei Rublev,” mpanao hosodoko medievaly [vanim-potoana antenantenany] avy any Rosia, namboarin'ilay artista Makedoniana Žaneta Vangeli tamin'ny taona 1995 ilay sanganasa, ary tsy misy ifandraisany amin'i Bolgaria.
Nilaza ihany koa ny The gallery fa nifangaro nandritra ny fanadiovana ny filaharan'ireo takelaka voalohany. Mampiseho izany filaharana izany ny lahatsary iray taloha nakarina tao amin'ny YouTube.
Tamin'ny 13 marsa, namoaka indray ny horonantsary mozika tsy misy ireo seho roa nampiady hevitra ny MRTV. Mikasika ny lova navelan'i Garvaliev, nilaza tao amin'ny fanambarana ny serivisy hoe:
Tsy manan-jo hanavakavaka na iza na iza mifototra amin'ny fivavahana, firenena na antony hafa ny raharaham-panjakana, ary manana fahalalahana feno izy hisafidy mpihira ho solontena, na inona na inona zom-pireneny. Raha ny tena izy, dia misy tranga marobe ahitana mpanakanto manana zom-pirenena roa na olom-pirenena avy amin'ny firenena samihafa mandray anjara amin'ny fifaninanan-kira Eoropeana.
Mandritra izany fotoana izany, dia nilaza i Garavaliev fa “tsy misy na inona na inona tokony hialany tsiny” raha ny lovany no jerena, ary “mirehareha amin'ny maha-Makedoniana azy izy.”
Namaritra ihany koa ny fanadihadiana anatiny nataon'ny MRTV fa “nanaja ny dingana anatiny rehetra ny fampielezam-peo ary nahafeno ny fepetra rehetra takiana amin'ny fizotran'ny fangatahana tamin'ny European Broadcasting Union (Vondrona Fampielezam-peo Eoropeana).” Nanamafy ihany koa ny serivisy fa hisolo tena an'i Makedonia Avaratra amin'ny fifaninanan-kira Eurovision Song andiany faha-65, izay hatao ny 18 ka hatramin'ny 22 Mey ao Rotterdam, Hôlandy i Garvanliev.
Voafantina i Garanliev tany am-boalohany hifaninana ho an'i Makedonia Avaratra tamin'ny Eurovision tamin'ny herintaona, izay nofoanana noho ny valanaretina COVID-19. Namela ireo mpandray anjara ireo ihany hifaninana amin'ny 2021 ny EBU raha mamoaka hira vaovao ry zareo. Nantsoina hoe “Ianao.” ny hiran'i Garvanliev tamin'ny taona 2020.
Tranoben'ny Radio sy Televizionam-panjakana Makedoniana (PBS MRTV) ao Skopje, Makedonia Avaratra. Saripikan'i Meta.mk, nahazoana alàlana.
Ny 23 marsa lasa teo, nampantsoin'ny praiminisitra lefitra Bolgara sy ny minisitry ny raharaham-bahiny Ekaterina Zaharieva mba hihaona amin-dry zareo ny ambasadaoron'i Makedonia Avaratra Vladimir Krstevski “anehoan-dry zareo ny ahiahy sy fahadisoam-panantenana lalina tamin'ny fanentanana ratsy anoherana an'i Vasil Garvanliev any Makedonia Avaratra”.
Nilaza ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny Boligara fa “hanohy hampiasa ny ezaka ilaina rehetra mifanaraka amin'ny fitsipiky ny lalàna iraisam-pirenena i Bolgaria mba hiarovana ny zon'ny olom-pirenena Boligara sy ireo olom-pirenena manana mari-panondroana Bolgara na aiza na aiza misy azy ireo. ”
Niezaka niantso ireo mpifidy azy ireo mpanao politika nasionalista Boligara talohan'ny fifidianana parlemantera tamin'ny alàlan'ny fanolorana volavolam-panovanana an'i Makedonia Amin'izany toe-javatra izany, nanakana ankarihary ny fampidirana ny mpifanolobodirindrina aminy ao andrefana ho ao amin'ny Vondrona Eoropeana i Bolgaria hatramin'ny firodanana taona 2020.